Nhau - LED Kura mwenje 'Makomborero uchienzaniswa nemagetsi echinyakare
HPS & HIDI girobhu VS LED inokura mwenje
HPS LED KUKURA CHIEDZA
Akatungamirira KUKURA MHARA
simba yakakwira simba, yakakwira enegry kushandiswa 1/2 simba reHPS, yakaderera enegry yekushandisa
hupenyu hwese 2000-3000 maawa Maawa 50000-60000
kunyatsoshanda chete 80% mwenje inoshanda kune chirimwa, 20% imarara sezvo isingakwanise kupinza nemuti yakagadzirirwa masekondi echirimwa, 99% inoshanda yakajeka mwenje
chakarondedzera haigone kusimudzira panguva yekukura akasiyana masekondi & switeches dhizaini yekudyara / veg / maruva
inodzora haigone kupenya ehe, inogona kusimba kana zvichidikanwa
chinobvumidza chikamu inoda kutonhora senge mafeni, AC, zvinoratidzira, ballast ect. pane zvaunoda, iva nekuvaka mukutakura kwekutyaira, mafeni, optic lens,
goho goho repamusoro yakanyanya goho repamusoro, yakawedzera 20-30% hasst
kuchengeteka yakanyanya kumanikidza girobhu racho kirasi I chigadzirwa chakachengeteka zvakanyanya
mutengo 1/2 mutengo kupfuura akatungamira inodhura zvishoma asi yakareba tern inodhura
LED yakaderera kudyiwa, hupenyu hwakareba, hunyanzvi hwekuita, hutanho hunonzwisisika uye hunhu hunogoneka, zvirinyore kukura, goho repamusoro, rakachengeteka zvakanyanya, kwenguva refu mutengo-unoshanda!
Kukura zvirimwa zvemukati zvine LED zvinokura mwenje ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa misoro. Kune vashoma chete varimi varikushandisa mwenje dzeLED, zvakadaro, asi huwandu hwavo huri kuwedzera nekukurumidza nezuva rega rega. Uine izvo mupfungwa, hazvishamise kuti kune ese marudzi emibvunzo pamusoro pavo uye vanhu vanonetseka kana ivo vari nani chaizvo kupfuura mwenje weHPS. Vanochengetedza mari here? Iwe unogadzirira iyo yakakwira mutengo wekumisikidza mwenje dze LED kana zvasvika kune magetsi bhiri kuchengetedza? Mwenje ye LED inotoita maruva zvirimwa zveZhizha paunenge uchida here? Zvinotaridza kuti mwenje yeLED inogona kunge iri nani kune chako chikwama uye nharaunda, saka wadii kunyatsotarisisa mwenje wekukura kweVS HPS? Vanhu vazhinji vanofunga kuti zvinoita sezvakanyanya kunaka kuti zvive zvechokwadi, asi chokwadi ndechekuti pane zvikonzero zvakanaka kwazvo zvekusarudza mwenje weLED.
Inodhura uye inotora nguva kuyedza kukura zvirimwa mumba. Chakagadzirwa mwenje masosi anogona kukwidza mutengo zvakanyanya. Kuedza kudzokorora zuva raJuly mumba mako hakusi nyore, shure kwezvose. Pamberi peiyo ichangoburwa mwenje wechiedza, mwenje weHPS yaive yakajairwa uye vaigara vane simba kwazvo nzara. Nechikonzero ichocho, yagara iri nhangemutange yekutsvaga sosi ine magetsi inoshanda kwazvo, uku ichigadzirawo mwenje. Magetsi maballasts ndiwo ekutanga makuru ekuvandudza uye vakaunza yakawanda yakawanda simba neiyo imwechete mvura. Vakachinja mutambo. Saka mwenje weLED ikozvino uvimbisa kaviri shanduko mumhedzisiro yekuti kuwedzerwa kwemaballast. Kana ivo vane simba rakadaro, nei vasina kutora zvachose nyika inokura nenzira imwecheteyo?
Zvichienzaniswa neHPS inokura mwenje, mwenje inokura mwenje inopenya munzira dzese. Kunyanya, mwenje kusimba uye kupisa kwavakaburitsa chinhu chinofanira kuyemurwa.
Chiedza Chakasimba. Vazhinji vanhu vanonetseka nezvemhando yekusimba iyo mwenje ye LED inogona kupa. Kuenzaniswa nemwenje yeHPS, kusimba kuri padhuze kunyangwe. Chinotaridzika ndechekuti mwenje yeLED haigone kukwikwidza kana ichiyerwa zvichienderana nematanho emhando dzemwenje idzi. Mwenje ye LED, mumayedzo, kunze inoita mwenje weHPS nguva dzese, kunyangwe kana dzisingaratidzika kunge dzichinyatso kuburitsa mwenje wakanyanya. Kana uchivaedza, mwenje yekukura yeLED yakakwanisa kuburitsa kana goho uye inoita kunge inoratidza kuti kufambira mberi mune ramangwana tekinoroji kunobatsira kuwedzera goho zvakanyanya, kunyanya kana ichienzaniswa nemwenje yeHPS.
Pisa. Kana iwe uri kushandisa HPS kukura mwenje uye unofanirwa kugara uchirwisa kupisa, mwenje dze LED dzinopa mukana unoshamisa. Panzvimbo pekushandisa imwe mari kutenderera mweya uye kuyedza kuitonhodza zvakaringana kuti usapise zvirimwa zvako, mwenje dze LED dzinogona kubata zvirimwa zvako pasina kukuvadza chero nzira. Ehezve, kana iwe uchikura mukutonhora kwemamiriro ekunze, mwenje weHPS inogona kunge ichiri kubatsira, kunyangwe zvingave zviri nyore kuve nyore kupisa imba yekukura, pane kumhanyisa njodzi yekushandisa HPS mwenje masisitimu. Iyo yekupisa kuburitsa kwe LED inokura mwenje inogona kuwedzera sezvavanokura kukura uye hombe, asi izvozvi mhando dzinoshandiswa nevarimi vazhinji dzinodziya kune iyo inobata, pasina imwe yeinopisa kupisa iyo yakajairwa inokura mwenje inopa.
Zvibereko. Mwenje ye LED yakaedzwa pane goho nguva nenguva. Pakazara, varimi vazhinji vemukati vanoshandisa mwenje weHPS vanowana goho re .5 gramu pawati. Kuti uenzanise, mwenje ye LED inowanzo gonesa 1g kusvika 1.5g pa watt, ichivaita kusvika katatu zvakanyanya kubudirira. Negoho rega rega, iwe uchave nekatatu chigadzirwa icho iwe waizodaro neimwe nzira!
Hupenyu. Ivhareji HPS yekumisikidza inogara kwemaawa anosvika zviuru gumi. Iyo inguva yakareba kana zvasvika pakukura, asi mwenje dze LED dzinozvitora zvakanyanya zvakanyanya. Iyo mwenje mwenje yekumisikidza inogona kukupedzera iwe zviuru makumi mashanu-100,000 maawa. Izvo zvinoshanda kusvika kumakore gumi nemashanu ehunhu kukura mumba izvo zvakachipa, zvinoshanda zvakanyanya, uye zviri nyore kupfuura nakare kose. Vanhu vazhinji vanoedza musanganiswa wakatsvuka uye webhuruu kuti vawane iwo musanganiswa wakaringana vechinangwa chavo.
Zvakawanda. Mwenje ye LED, ichienzaniswa nemwenje yeHPS, yakanyanya kuwanda. Iwo mwenje HPS mwenje haipe yakawanda maererano nehunyanzvi. Mwenje yemwenje, zvisinei, inogona kumisikidzwa yakatenderedza zvirimwa zvako uye padyo padyo, nekuda kwekushomeka kwekupisa kunouya kubva kwavari.
Rudzi rweChiedza. Rudzi rwechiedza chinovhenekerwa nemwenje ye LED zvakare rakanyatsogadzirirwa iwo maruva uye nhanho dzekukura. HPS mwenje inoburitsa iyo yakazara wavelength, asi mwenje ye LED inotarisisa pane yebhuruu uye tsvuku matinji anokwana zvido zvemuti uye anoita shuwa kuti chidimbu chega chechiedza chinoshandiswa chaizvo kune chikamu cheanokura maitiro.